‘अब इपानभित्रको किचलाे धेरै तन्काउनु ठिक छैन’ - UrjaKhabar ‘अब इपानभित्रको किचलाे धेरै तन्काउनु ठिक छैन’ - UrjaKhabar
काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन हुने निश्चित भइसकेको छैन । पटक–पटक सरेको निर्वाचनको नयाँ मिति नतोकिए पनि निजी ऊर्जा उत्पादकहरू यतिबेला चुनावी दोडमा छन् । २ प्यानलमा विभिन्न पदका लागि ३० जनाले उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् । उनीहरू अहिले आफ्नो पक्षमा भोट माग्न व्यस्थ देखिन्छन् । यसै सन्दर्भमा, उपाध्यक्षमा उमेद्वारी दिएका गणेश कार्कीसँग इपान निर्वाचन र यसको सेरोफेरोमा रहेर ऊर्जा खबरले गरेको कुराकानीको सार :
निर्वाचन राम्रैसँग लागेको देखिन्छ । यहाँका एजेण्डा कस्ता छन् ?
अहिलेसम्मको प्रयास सर्वसम्मतबाट नै इपानको नयाँ कार्यसमिति चयन होस् भन्ने छ । सहमति नजुटेको अवस्थामा लोकतन्त्रमा निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प हो । निर्वाचन भएको अवस्थामा मैले पनि उपाध्यक्षमा उमेद्वारी घोषणा गरेको छु ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवर्द्धकले दशकौंदेखि भोग्दै आएका समस्या साझा छन् । सबैले उठाउने तिनै समस्या हो । यो समस्या उसको, यो समस्या मेरो भन्ने छैन । यही कारण इपान कार्यसमितिको चुनावी प्रचारका लागि मेरा अलग्गै एजेण्डा छैनन् । सबैका एजेण्डा नै मेरा हुन् । यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय भएको हिसाबले सबैले भोगिरहेका साझा समस्या समाधान गर्न सरकारसम्म आवाज पुर्याउन पहल गर्ने भूमिका मेरो रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहान्छु ।
एउटा प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको समयदेखि बत्ति बाल्ने चरणसम्म र बत्ति बलिसकेपछि पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउन नपाएको अवस्था छ । प्रसारण लाइन समस्याले पनि कति आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाउँदा धेरै आयोजना रुग्ण बनेका छन् । यो आवाज निरन्तर उठाउनुपर्छ ।
अनुमतिपत्र लिएर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नभएका धेरै आयोजना छन् । नीतिगत कठिनाइले पिपिए भइसकेका आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । हिजो झोलामा खोला भन्ने उखान निकै चल्यो । तर, आज झोलाको अर्बौं रुपैयाँ खोलामा बगिसक्दा पनि आयोजना निर्माण चरणसम्म पुर्याउन कठिनाई भोग्नु परिरहेको छ । नीति नियममा कडाई गर्ने बहानामा लगानीमैत्री वातावरण बिग्रदै गएको छ । यी विषय सरकारलाई बुझाउन सक्ने क्षमता म राख्दछु ।
विगतमा सरकारले गरेका भ्याट छुटलगायत प्रतिबद्धता आजसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसको कार्यान्वयनको पहल गर्न सरकारसमक्ष निजी क्षेत्रको आवाज पुर्याउन मेरो भूमिका रहनेछ । यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।
वर्तमान कार्यसमितिमा सदस्य हुनुहुन्छ । नयाँ कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष नै ताक्नुभयो नि ?
वर्तमान कार्यसमितिमा सदस्य नै नभएका प्रवर्द्धकले आज अध्यक्ष उमेद्वारी घोषणा गर्नुभएको छ । म त बरु एक कार्यकाल सदस्य भइसकेँ । इपान सबैको साझा संगठन भएकाले जुनसुकै पदका लागि पनि उमेद्वारी दिन सकिन्छ । मैले एक कार्यकालमा धेरै कुरा देख्ने र सिक्ने अवसर पाएँ ।
वर्तमान कार्यसमितिले धेरै काम गर्न सकेन । केही काम गरेको छ । तर, अपेक्षाकृत काम भएन । यसबीचमा सरकारसमक्ष लबिङ गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । यही कारण पनि उपाध्यक्षमा मेरो उमेद्वारी हो । जलविद्युत् ठूलो लगानीको क्षेत्र हो । यहाँ हाम्रो ठूलो लगानी फसिसकेकाले छ । अब इपान कार्यसमितिमा आउने सके राम्रो टिम बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
यसपटक कार्यसमिति चयन प्रक्रिया धेरै विवादित बन्न पुग्यो । के कारणले यस्तो भयो ?
इपानमा आउन चाहाने आकांक्षीहरू धेरै देखिनुभयो । अघिल्ला वर्षहरूमा यस्तो थिएन । सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास गरिए पनि सम्भव देखिँदैन । सबैलाई पद चाहिएको छ । कोही सहमतिमा आउन तयार नहुँदा निर्वाचन प्रक्रियामा जानु नै उत्तम विकल्प हो ।
प्रोक्सीको कुराले पनि विवाद भयो । कुनै पनि कम्पनी आफैंले आएर त भोट हाल्दैन । कम्पनीले पठाएका आधिकारिक प्रतिनिधिले नै भोट हाल्ने हो । संसारको नियम नै यही हो । यसकारण, भएसम्म सहमतिमा नत्र निर्वाचनबाट चाँडो टुङ्गो लगाइनुपर्छ । लामो समय अन्योलता रहिरहे निजी क्षेत्रले उठाउनुपर्ने धेरै विषय ओझेलमा पर्छन् ।
विद्युत विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । यसबारे छलफलमा कुन टोली जाने ? पुरानो जाने कि नयाँ भन्ने विवाद आउन थालिसक्यो । नयाँ कार्यसमिति आउँदा यस्ता विषयमा सरकारसँग परामर्श गर्न सहज हुने थियो । यसकारण चाँडै यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ । मैले भनेको नै सही हुनुपर्छ भन्ने अडान त्यागेर अहिलेको विवादको समाधान खोजिनुपर्छ ।
उपाध्यक्षको रूपमा यहाँले उठाउनु भएका मुख्य विषय के–के हुन् ?
जलविद्युत् क्षेत्र अहिले कोमामा छ । कोरोना महामारीले यो क्षेत्रलाई झन् थला पार्यो । संसदमा पुगेको नयाँ विद्युत विधेयक पनि निजी क्षेत्रको हात बाँधिदिने गरी आएको छ । ठूलो लगानी भएको क्षेत्र कोमामा जाँदा प्रवर्द्धकहरू सडकमा आउने अवस्था आइसक्यो । बनेका साना आयोजना रुग्ण छन् । १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाले पनि प्रसारण लाइनको समस्या झेलिरहेका छन् । यसको अर्थ अन्ततः जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रवद्र्धक डुब्ने नै हो । डुब्न लागेका लगानीकर्तालाई बचाउन जरुरी छ ।
मसँग वर्तमान कार्यसमितिमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय भएर लागेको छु । यो क्षेत्रमा प्रवर्द्धकले भोगेका समस्याकाबारेमा जानकार छु । यो क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारसमक्ष लविङ गर्ने क्षमता पनि राख्दछु । अहिलेको हाम्रो प्यानलका उमेद्वारहरूको टिम पनि राम्रो छ । एकजुट हुन सके यो क्षेत्रलाई बचाउन धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसमा मेरो हरसम्भव पहल हुन्छ ।
दुई प्यानलमा उमेद्वारी घोषणा भए पनि अझै सहमतिको प्रयास भइरहेको सुनिन्छ । सहमति भए भने कुन पद स्वीकार्नुहुन्छ ?
धेरै प्रवर्द्धकहरू इपानसँग जोडिनुभएको छ । उहाँहरू सहमतिमा अघि बढौं भनेर लागिरहनु भएको छ । उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ । सहमतिमै जान सके राम्रो सन्देश पनि जान्छ । तर, अहिलेसम्म सहमति जुटेको छैन । २ प्यानल गरेर ३० जनाले उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् । लामो समयसम्म नयाँ कार्यसमिति नआउँदा जलविद्युत् क्षेत्रसँग जोडिएका सबै क्षेत्रमा हाम्रो आलोचना हुन थालेको छ । निर्वाचन नगर्ने हो भने सहमति गर्नुपर्यो । अग्रजहरूले दिने राय/सुझावअनुसार सहमति गर्न सकिन्छ ।
जुन प्रक्रियाबाट गए पनि कार्यसमितिमा जाने १५ जना मात्रै हो । १५ जना बाहिरिनुपर्छ । वास्तवमा कोही हारेर वा जितेर केही हुँदैन । जुनसुकै अवस्थामा प्रवर्द्धकले काम गर्नैपर्छ । कार्यसमितिमा हुनेले केही बढी समय दिनुपर्ने हुनसक्छ । तर, कार्यसमिति बाहिर रहने सदस्यले पनि काम त गर्नुपर्छ । त्यसकारण मिलेसम्म सहमतिमा जाउँ । नमिले निर्वाचन गरौं । तर, अझै कार्यसमिति चयन प्रक्रियालाई किचलो नबनाऔं । धेरै नतन्काऔं ।